Apartment Amor - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSanja I Goran
Relax kwilali entle yaseBacina, kufutshane nePloce, kufutshane neSplit, kufutshane neDubrovnik kwaye kufutshane neCroatia islans Hvar, Korčula, Mljet kunye nePelješac ngendawo yokuhlala eApartment Amor. Eli gumbi linegumbi elinye linayo yonke into oyifunayo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho. Yiba namava omlingo wamachibi asixhenxe e-Bacina adumileyo, hamba ukhwela inqanawa, okanye uyeke ume nje phakathi kweSplit neDubrovnik. Igqibelele izibini okanye amaqela 3. Sijonge phambili ukukwamkela.
Ukwamkela nokumema ngesitayela, i-Fleti Amor ifumaneka kwidolophana yaseDalmatian yaseBacina. Idume ngamachibi amahle asixhenxe, kwaye iphantse ibe phakathi kwamaziko aphezulu okukhenketha eDubrovnik neSahlulo, iflethi yethu yeyona ndawo ifanelekileyo yeeholide eDalmatia.
With a beautiful and intimate double lokulala, igumbi lokuhlala kunye usofa ubuthongo, izixhobo zekhitshi mihla kunye lokuhlambela mihla kunye ishawa, yonke into oyifunayo ukuze uhlale nathi iyafumaneka. Yonwabela ubumnandi bomoya wentsasa, okanye wonwabele ukuhlwa okumnandi kwithala langaphandle elijonge igadi.
Olu lukhetho oluhle kakhulu kwizibini kunye neentsapho ezincinci ezifuna ukuchitha ixesha kule ndawo enhle.
Le ndlu ibekwe kumbindi welali yaseBacina, ilali ezolileyo engaphandle kwePloce.
Kuninzi ekufuneka kwenziwe ngexesha lokuhlala kwakho nathi. Yonwabela ukuhambahamba kancinci kunye namachibi adumileyo eBacina. Hamba nge-paddle boarding, okanye uthathe uhlobo olukhethekileyo lwesikhephe sendawo (lađa) ukuxabisa ngokupheleleyo ubuhle bale ndawo ikhethekileyo.
Kungenjalo, thatha uhambo olufutshane ukuya kwelinye lamalwandle amaninzi kunxweme lwaseDalmatian.
Ukuhamba ngebhayisekile ikwalixesha elidlulileyo elidumileyo- kukho umjikelo ojikeleza amachibi.
Kungenjalo, phumla kwaye umke kwi-buzz yobomi bakho bemihla ngemihla kwaye wonwabele uxolo noxolo lwale ndawo ikhethekileyo.
Idolophu ekufutshane yasePloce inonxibelelwano lwenqanawa ukuya ePeljesac. Amanye amazibuko eenqanawa ezi ziqithi asezidolophini ezikumganyana nje wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Sanja I Goran
We believe in, and live by, love.
Friendly, welcoming and willing to share the beauty of the area that we live in with you.
We look forward to hosting.
Sihlala kwiflethi engentla kule. Sikhona ngayo nantoni na onokuthi uyifune ngexesha lokuhlala kwakho - nokuba lulwazi malunga neevenkile ezikufutshane, izinto ezenziwa kwindawo yalapha okanye iingcebiso malunga nokuba zeziphi iiwayini zalapha ekhaya oza kungcamla! Sifumaneka kangangoko okanye kancinci njengoko iindwendwe zethu zinqwenela.
Sihlala kwiflethi engentla kule. Sikhona ngayo nantoni na onokuthi uyifune ngexesha lokuhlala kwakho - nokuba lulwazi malunga neevenkile ezikufutshane, izinto ezenziwa kwindawo yal…